Kouoterone intermediates Powder (2701-50-0) hplc≥99% | AASraw
Oxandrolone (Anavar) vovoka (53-39-4)
/ Products / Ny hafa / Powder intermediates Powder (2701-50-0)
Kouoterone intermediates Powder (2701-50-0)
4.20 avy amin'ny 5	miankina amin'ny 5 mpanjifa naoty
SKU: 2701-50-0. Sokajy: Ny hafa
Ny AASraw dia miaraka amin'ny synthesis sy ny fahaiza-manaon'ny famokarana avy amin'ny grama ka hatramin'ny filaharan'ny mason-tsivana amin'ny kaomisera Mediam-bokatra aombeoterone (2701-50-0), eo ambany fanaraha-mason'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao azo jerena.
Caioterone intermediates Powder (2701-50-0) horonan-tsary
Sokajy mpanelanelana amin'ny kopioterone (2701-50-0) Specification:
Ny firafitry ny simika: Product Name: Mpanelanelana ioteroterone
Synonyms: Sokajin-tsokajin'ny kopioteroneone EP
Storage: Maina, maizina · ary amin'ny 0 - 4 C mandritra ny fotoana fohy (andro mankany herinandro) na -20 C mandritra ny fotoana maharitra (volana ka hatramin'ny taona).
Sokajy mpanelanelana amin'ny kopioterone (2701-50-0) Description:
Ny mpanelanelana kopioterone dia antsoina koa hoe 6-Deschloro kopioteroneone Acetate, ny mpanelanelana kafeoterone dia fahalotoan'ny côtate kopioterone.
AASraw manome ny fahadiovana 98% Oxandrolone / Anavar vovony mena ho an'ny mpamboly biriky na laboratoara ambanin'ny tany ho fampiasana am-bava.
Inona no ampiasain'ny Oxandrolone?
Anavar dia iray amin'ireo steroid avo indrindra ampiasain'ny lehilahy sy ny vehivavy